Sawirro Yaab leh: Baarlamanka Soomaaliya oo buuq lala xakameyn waayey, laguna kala dareeray! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro Yaab leh: Baarlamanka Soomaaliya oo buuq lala xakameyn waayey, laguna kala dareeray!
11th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir ku yeeshay Muqdisho ayaa kala dareeray kadib markii uu halkaas buuq farabadan ka dhacay, islamarkaana gudoonku xakameyn waayey shirka.
Qodobada maanta looga doodi lahaa baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa Mooshin kalsoonida loogala laabanayo R/wasaare C/weli Sheekh Axmed, hase ahaatee mooshinkaas ayaa inta aan la gudbin waxaa buuq kala hortegay xildhibaanada taageersan R/wasaare Cabdiweli.
Gudoomiyaha Baalamaanka Soomaaliya Prof Jawaari ayaa markii uu kursigiisa soo fariistay kana dalbaday Xildhibaanada in ay is dajiyaan ayaa la sheegay in isna lagu buuqay oo ay ku oriyeen Xildhibaanada qaarkood taa oo kentay in Jawaari Kursiga ka kaco isaga oo qeylinaya carana ay ka muuqato wajigiisa.
Xildhibaanada ka horjeeda mooshinka ayaa ku qeyliyey “Ma dooneyn mooshin lacag lagu qaatay, Ma dooneyno Qaran dumis”, waxeyn qaarkooda yeerinayeen firimbiyo.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa markii uu 3 jeer ku guuldareystay inuu xakameeyo shirka ku dhawaaway in kulanku xiran yahay.
“Fadhiga waa noo xiran yahay inta fadhiga xiga laga gaarayo, inta maanta sameysan buuqan tallaabo ayaa ka qaadeynaa”ayuu yiri Prof. jawaari oo aan sheegin waqtiga la isugu soo laaban doono.
Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku hanjabaya in tilaabo sharci ah laga qaadi doono xildhibaanada maanta buuqa ka abuuray baarlamaanka, kuwaasoo hor istaagay in xilshibaanada loo qeybiyo mooshin ka dhan ah R/wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Xildhibaan caan ah oo ka badbaaday weerar lagu khaarijin rabay
Taliye Ku-xigeenkii Waaxda Socdaalka Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho